Ziziba yokuba onke amaxesha abantu babekholelwa ukuba umhlaba ungqukuva. Nkqu iBhayibhile ithetha umhlaba nxazonke!
Ubuxoki yelizwe bekuya kuba tyaba ukuza evela kubukho ababefuna ukunyelisa namaKristu nokugculelwa. Ngoko ke ubuxoki sisusela abachasi ukholo lwamaKristu! Le ubuxoki kanjeyana amanye amaKristu wavele wavuma!
Njengoko nazi, ukuba kukho inqaku kunye nevidiyo wafumanisa ukuba umhlaba wethu ngeenxa zonke. Akudingeki ukuba sisazinzulu ukuqonda. Wena nje ukuba aphume ngobusuku ecacileyo khangela phezulu iinkwenkwezi ungabona ukuba yandisa ehlabathini lonke.
Kodwa xa uthabatha lo mbandela njengoko izakufunyanwa abathile waqala ngoko nangoko uzama kunye ukushumayela phantse esilawulayo ukufumana abanye ukuba bakholelwe kumhlaba othe tyaba. Njengesiqhelo, ukuba ababaninzi bona basazisayo izahlukano, kodwa ukwenza abantu engakholelekiyo. Kunye neengxoxo hayi ngokwaneleyo, leyo ngokucacileyo ntoni, ngoko omnye okanye abe ndlongondlongo. Kwaye lo nto ibonisa ukuba kukho into engalunganga kunye mpilweni.
Ubani ucinga ukuba ayinamsebenzi ukuba amanye amaKristu (kuba eneneni kukho amanye amaKristu) bakholelwa kumhlaba othe tyaba, kodwa akukho omsulwa. Kokukhutshwa ubuxoki, ngoko kulula ukuba ezinye izinto kakhulu. Kukho izinto zidalwe caba emhlabeni, ezifana abakholelwa ukuba Ngenkohlakalo amaYuda kwezigidi ezithandathu kwenzeka ebudeni beMfazwe Yehlabathi II.
Manga of kubukho
Kwakungo-1800 njengoko kubukho weza ubuxoki amaKristu akholelwa okanye nakholwa ukuba umhlaba uthe tyaba. Utsalele ukhe weva ubuxoki, kuse emaphakadeni Christian Aphakathi ibandla yakholwa kumhlaba othe tyaba kunye nababingeleli balumkisa uChristopher Columbus ukuba ahambe emhlabeni ngenxa yokuba babesoyika kokuwa kusukwa caba behlabathi. Kodwa elibubuxoki ubizwa ngokuba factoid . Eso ubuxoki eye izibakala kuba kodwa nje ubuxoki.
Kwaye umyeke ubuxoki ebomini bakho, oko kungaba ukudida ukholo lwakho zamaKristu ukuze uqale ukuthandabuza uYesu yaye ekugqibeleni ukuhamba naye. Ngoko oku kuyingozi kakhulu. Kukho zonke iinjongo villoläras ukuba uya wabhideka, qala kwamathandabuzo ukuze ushiya ukholo kuYesu ukuze ukuba uya kusindiswa.
Plat Amakholwa bathi umhlaba ngeenxa disc caba le yediski a nkundla. Kulo amajukujuku, ilanga iinkwenkwezi nenyanga olunamathelisiweyo kodwa oku luyasuka uThixo. KuThixo ngalo ukholo akazange adale indalo, kodwa yena uye udale umhlaba kunye amajukujuku abanye iinkwenkwezi, ilanga nenyanga. Akukho nto esithubeni.
Yintoni uThixo encinane, Andikholwa. Baye kwanciphisa uThixo. Ndiyakholelwa onamandla nguThixo omkhulu owadala yonke iphela.
Lo ngomnye isizathu I usindiswa xa ndeva kuqala uthando lukaThixo. Ndandicinga ukuba uThixo ukho, umele ukuba wadala yonke le enkulu. Ngoko ke yonke umhlaba nayo yonke into. Kwaye konke oku uThixo omkhulu uyandithanda.
Sokukholelwa ukuba uThixo udale iflethi disc kunye lwesakhiwo zeenkwenkwezi nenyanga nelanga ziqhotyoshelwe kukunciphisa ngokwenene uThixo wethu omkhulu nonamandla. UThixo wam unamandla yaye mkhulu kangangokuba uye wadala yonke indalo kunye nomhlaba kunye ngeLizwi laKhe!
Hebhere 13: 3 "Ngokholo siyaqonda ukuba indalo yavela ngelizwi likaThixo , ukuze ukuba ibonakale azenziwanga ngaphandle koko kubona."
bathini Umhlaba Flat abaphika ukuba indalo yakhe. Kodwa nantsi ke kucacile ukuba indalo yavela ngelizwi likaThixo. Indalo ikhona ngaphaya kwamathandabuzo - iBhayibhile itsho njalo.
Ukuba ke bakufumanisa kunzima ukuqonda ukuba uThixo wadala indalo iphela yonke, kufuneka wenze oko sikufunda vesi:
Hebhere 13: 3 " Ngokholo siyaqonda ukuba indalo yavela ngelizwi likaThixo ..."
Kufuneka ukholwe ! Kwaye ngokholo ukuqonda ukuba indalo yavela ngelizwi likaThixo. Ukuba ufuna ukuqonda: ukholo! Ngokholo, uyaqonda. Kodwa aninako ukuqonda ukholo yangaphambili. Ukholo iya kusoloko wangaphambili. Ukuqondwa uza emva. Ngokuba ngokholo baya kuqonda.
Kwaba ngo-2017 ukuba Ndafumanisa Okumangalisayo wam ukuba kukho abo bakholelwa ukuba umhlaba uthe tyaba. Kukho abo ukuba ngamaKristu akholelwa kuyo, yaye wothuka ngakumbi, kukho amaKristu akholelwa ukuba!
Bathi ukuba bubuxoki conspiratorial ezivela bethu ukuba umhlaba uya kuba ngeenxa zonke. Ziziba yokuba onke amaxesha abantu babekholelwa ukuba umhlaba ungqukuva. Nkqu iBhayibhile ithetha umhlaba nxazonke.
Umhlaba flat lingeenxa
Ngaba uyazi ukuba ibali indalo yeBhayibhile kwiGenesis uchaza umhlaba nxazonke? Ukuba sifunda bokstsavligt iBhayibhile siyabona ukuba uchaza umhlaba nxazonke, ulilanga ngeenxa zonke, inyanga ngeenxa kunye neenkwenkwezi ngeenxa zonke.
Kukho abo asabele emva nqaku kwam malunga imfundiso umhlaba tyaba yingozi ukuba kukho abo bakholwayo kumhlaba othe tyaba size kananjalo ukusasaza ngayo. Bathi uyifumana iyinto engaqhelekanga kakhulu. Phambi kokuba ndize kulo lonke eli, andizange ndicinge kwakukho abantu abaninzi kakhulu owacinga umhlaba wawuthe tyaba.
Umhlobo ongumKristu babecinga ukuba zasemzini Akuba sifunda oku ku site yam blog, kodwa emva koko yena wazifumana ziqwenga zibini baqiniseka ukuba umhlaba uthe tyaba.
A kudala ndabona inkqubo kamabonakude on TV efanayo Swedish oko malunga kwiqela waseMelika wathi uMhlaba platt.De Siqinisekile ukuba siye ekhohlisa nokuba ubuxoki omkhulu imbali kunye necebo umhlaba uza kuba ngeenxa zonke. Kwakhona ayinako aphikisane kubo ngenxa yokuba baye bathi izingxoxo ukuba Umhlaba flat. Ebonisa ukuba kukho imifanekiso ukuze wendiza nje off ngokuthi: "! Ngabo photo waxhuma"
Ewe kukho amakholwa abo eqiniseka ukuba umhlaba uthe tyaba. Kwaye xa zithetha eBhayibhileni. Kukho amanye amakholwa emhlabeni flat abathi ezinye iicawa Islam kunye New Age ukuba uqinisekile umhlaba flat. Kubonakala ngathi kukho amakholwa caba emhlabeni ekumeniker ke ungavuma malunga Kumhlaba tyaba.
Kodwa ukuba umKristu ukuba iBhayibhile ithetha ukuba umhlaba tyaba ngoko umele bayasigqwetha okubhaliweyo yezibhalo kakhulu, umxhwile phandle mxholweni. Ukuze ufunde iBhayibhile ngokwenene oko, uyabona ngokucacileyo ukuba iBhayibhile ifundisa ukuba umhlaba nxazonke!
Enyanisweni nina singayenziyo mfuneko inzululwazi ukuze ibancede ukuba umhlaba ungqukuva. Kufuneka kuphela ukufunda iBhayibhile ukutyhubela iminyaka ibe yinyaniso, kwaye kunjalo ngoku.
Aba titshala ababuxoki zithi ilanga nenyanga ke into enye. Aba uhlobo olufanayo lokukhanya. Yinto nje ukuba ukukhanya inyanga lucaca buthathaka kancinane. Baya kuthetha ukuba bathi Inyanga orb elivuthayo ngendlela efanayo njengoko ilanga. Ewe ngenene ibhola ovuthayo. Bathi ukuba kukho ngundaba ibhalbhu ukukhanya phezu komhlaba, baza ke bathi ilanga luhlobo ukukhanya olukhanyisela Earth.
Siye wakhangela phezulu elangeni yaye siye sabona ukuba kukho ibhola ovuthayo. Ukuba enyangeni leyo eyayiza kuba orb otshisayo, njani umfanekiso enye inyanga yimingxuma ayo ukuba abe nyaka emva konyaka? Kutheni kuyitshintsha imbonakalo kwenyanga yenyanga iquka wesihogo elitshayo? Ezi kuthetha ukuba bubuxoki ukuba inyanga ibonisa imitha yelanga ngayo Earth.
Ukuze ufumane lo mbono kufuneka nokungxamela amazwi iBhayibhile, yaye yiloo nto kanye abayenzayo xa bezama ukunyanzela le mbono ngokuthi uThixo wadala izibane ezimbini ngokulinganayo. Ngamanye amazwi, ukukhanya kwenyanga ukuba iyafana ilanga, koko eze kunye oku kufuneka ukuzigqwetha kwaye phosakeleyo ilizwi likaThixo abazi.
Xa uThixo uthi malunga izibane oko akuthethi into enye yiloo uhlobo olufanayo lokukhanya. Uthi ilanga ingaphezulu nenyanga incinane kumbhalo kwibhayibhile. Ngoko ke iintlobo ezahlukeneyo ezimbini ukukhanya.
Ngaphezu koko, iBhayibhile ama yenzululwazi. IBhayibhile ibhalwe ukuba bacinge, bafumane indlela eya usindiso ngoYesu Kristu, uNyana kaThixo. Kungenxa yoko le nto iBhayibhile incwadi apho. Oku akubhalwanga ukunika imbali yenzululwazi. Kodwa umgca ezifunyaniswe zizazinzulu. I ababini bathethe omnye nomnye.
Ilanga wayeza silawule imini kunye nenyanga silawule ubusuku. Nokuba apha ungabona ukuba umhlaba ungqukuva. Kungenjalo kwakungayi kuba imini nobusuku. Xa sifunda iBhayibhile njengoko xa akwenzeki naliphi na ishishini funny. Kodwa xa siqala ukubeka ingqondo kunye neengcamango zabantu ngoko kuya kuba crazy, kwaye singakwazi ukufumana engalunganga konke. Oku kungakhokelela sisiphambusa into, oko sikubonileyo imizekelo emininzi.
Flat Umhlaba fane ngokukhokelela kwamanye amahlelo. Bakholelwa ukuba amaYuda aba emva bonke ububi emhlabeni. Mna ndize namakholwa caba emhlabeni abangakholwanga Ngenkohlakalo, lo kohlanga yamaYuda ebudeni beMfazwe Yehlabathi II, xa kwezigidi ezithandathu amaYuda wabulawa nje kuba amaYuda.
Endaweni yoko, bakholelwa ukuba oku kububuxoki wadala ngamaYuda ukuba oko ukufumana novelwano ukuze bakwazi ukubuyela kwilizwe labo wakwaSirayeli. Nakuba kunjalo, ukuba abathanga bakholwe ukuba nguThixo unobangela kwiLizwe kaSirayeli.
Awakholelwa ukuba uThixo wanika amaYuda bakaSirayeli 1948. Endaweni yoko, akholelwa ukuba wona nguMtyholi. Ngaba uliqaphele yokwenza umhlaba inkolelo tyaba kunokukhokelela? - ubuxoki nnangaphezulu nabakhohlisayo!
Umhlaba, ilanga, inyanga, iinkwenkwezi
Ngoku makhe sibuyele koko ilizwi likaThixo. Abo bakholelwa kumhlaba othe tyaba kuthetha ukuba umhlaba a flat diski ngeenxa into phantsi. Bathi kwakhona ukuba ilanga a flat disk ngeenxa nenyanga ngokunjalo. Kodwa akukho lula ukufumana phandle. Kuba ujonge nje phezulu esibhakabhakeni ukusuka ilanga nenyanga kwaye uya kubona ukuba iibhola ngeenxa zonke.
Ngoku, lumka xa ubona ilanga. Oku kunokuba yingozi ukuba ujonge ilanga. Unako babe ziimfama. Ngoko ke, kufuneka ube ukhuseleko olukhulu amehlo akho xa ubona ilanga.
Njengokuba ilanga nenyanga ngeenxa zonke, ngoko ke Kakade ke umhlaba ngeenxa zonke. Ngaba UThixo abe kufikwa kangangokuba udala ngeendlela ezahlukeneyo? Akunjalo! Umhlaba kunye ilanga nenyanga ziyenziwa ngeenxa. UThixo akazange behamba ukusuka Umgaqo indalo. Usebenzisa lo mgaqo xa wadala umhlaba, inyanga ilanga neenkwenkwezi.
Kufuneka siye umyalelo kaThixo indalo ukuzisa kunye nomhlaba tyaba. Nathi ke ngoko kufuneka uye kulwa ilizwi likaThixo, oko kubhalwe ngayo ibali ibali yendalo.
Ilanga nenyanga okunika amaxesha, kodwa la maxesha nga kubanjwa kuphela ukuba umhlaba ungqukuva. Kungenjalo, hayi ubalo emsebenzini. Iintsuku neenyanga ayisoze ilayishelwe wabala ukuba umhlaba nxazonke.
Kwakhona, uyabona ngoku kule ndalo ukuba iBhayibhile ichaza umhlaba nxazonke. Kukho ezinye iindawo eBhayibhileni malunga nomhlaba ngeenxa kodwa apha incakuba yokuqala yeBhayibhile wachaza umhlaba nxazonke engqukuva kunye akukho wumbi. Lichaza umhlaba ngeenxa njengoko ichazwa inyanga ngeenxa zonke, kananjalo kuchazwe iinkwenkwezi ngeenxa zonke. Khomba!
Inyanga umdla ukwazi ukuba inyanga akusoloko ngeenxa zonke? Ngamanye amaxesha kuba nje iceba. Ngamanye amaxesha kuba nje iceba elincinane, kwaye maxa wambi ukubona inyanga ngawo onke amaxesha ahlukeneyo. Oku kungenxa yokuba i-Earth imithunzi iNyanga setyhula. Bekuya kuba nzima ukufumana isithunzi onjalo ukuba umhlaba zimjikelezile.
Ukukhulisa kumhlaba othe tyaba ngoko kufuneka uye kulwa engqondweni yakho. Kufuneka uye kulwa yintoni amehlo akho ubone bemkhanyela engokoqobo. Ukukholelwa iqiniso ukholelwe oko uyabona, ngokuba akuyi kuba engalunganga.
Ngoku ukuba wajonga indalo iBhayibhile waza wagqiba ukuba uThixo wadala umhlaba ngeenxa zonke, ulilanga ngeenxa zonke, inyanga ngeenxa kunye neenkwenkwezi ngeenxa zonke. UThixo ethetha umhlaba ngeenxa kwezinye iindawo nabo eBhayibhileni.
Amanzi Ngaphezu kwesibhakabhaka
Ngaphambi kokuba isiphelo eli nqaku, kufuneka ukhankanye ingongoma ebalulekileyo tyaba wendalo emhlabeni bonisa wokufama. Bathi leyo isemhlabeni tyaba, yinto nkundla. The Dome na isibhakabhaka, bathi, kwaye ngaphezu kwawo kukho amanzi amaninzi.
Oku kungabonakala njani crazy naliphi na ixesha kodwa enyanisweni ukuba ngokwenene ukufumana isibhalo kuwo. Kubhaliwe kwathiwa, uThixo wadala nesibhakabhaka phakathi emanzini, wawahlula amanzi ngaphezu kwigumbi kunye namanzi phantsi egumbini. Apha emhlabeni caba amakholwa ingxabano. Kwaye ndiyacinga ukuba ndifumene ingxoxo elungileyo ngokwenene. Kwaye kunzima ayingqinelani ukuba unolwazi kakuhle iLizwi likaThixo iBhayibhile. It liyi- kumbhalo eBhayibhileni ukuba kukho amanzi ngaphezu esibhakabhakeni.
Kodwa siyazi namhlanje ukuba akukho manzi apho. Xa baya enyangeni ukususela 1969 ukuya 1972 ngoko sixelelwa nto ngaloo nto ke bawutyhutyha lulwandle amanzi ngentla kwesibhakabhaka. Isizathu kambe kukuba akukho manzi apho. IBhayibhile ichaza ngendlela elula kakhulu okunene ngayo izinto. Ngoko ke, simele sihlale sifunda iBhayibhile. Ngoko ke sifumane impendulo.
Xa uThixo wadala umhlaba ngenene ukuba amanzi ngeenxa esibhakabhakeni. Enye into asikwazi ukuqonda itekisi yeBhayibhile. Ubesakuthi, kodwa ngenxa yokuba siyazi ukuba amanzi khona namhlanje, into umele ntoni ukuba unyamalale. Xa kwenzeka oku, yaye xa amanzi unyamalale? Yenzeka njani loo nto? IBhayibhile iye impendulo kumnandi.
UNowa kunye neempuphuma
Abantu babehlala esonweni, ihlabathi lalizele bubundlobongela nobubi. Xa uThixo wagqiba ekubeni atshabalalise bonke ubomi on Earth ingubo emanzini. Kodwa uThixo akanguye uThixo anamagazi ofuna ukufa ngequbuliso. Akunjalo, nguye uThixo wothando ofuna ophule usindiso. Ngoko ke, wayefuna ukulondoloza uNowa olilungisa kunye nentsapho yakhe.
Oku kuya kwenziwa, wakha umkhombe, isikhephe omkhulu. Baya kuzisa ngambini kuzo zonke eziphilileyo zomhlaba, ukuze basindiswe. UNowa wakha inqanawa, wafika unogumbe. Bonke ubomi ezazingekho emkhombeni, bobabini abantu kunye nezilwanyana, batshoniswe, wabulala zatshabalala xa wafika unogumbe.
Xa kwafika uMkhukula, oku kwenziwa ngokukhawuleza kakhulu. bazalisa Ngokukhawuleza komhlaba ngamanzi. Umhlaba waba iplanethi amanzi. Njani umhlaba uya kuzaliswa ngokupheleleyo ngamanzi? Njani ukuba yenzeke yaye uye njani kangaka ngokukhawuleza?
IBhayibhile ithi uThixo wavula iingcango zezulu kunye imithombo enzonzobila. Ke kwakukho amanzi Bungaphezulu kwamazulu, phezu kwesibhakabhaka. Yeyona amanzi esiye sathetha ngayo. UThixo wavula iifestile ezulwini ukuze manzi zixoxe phantsi emhlabeni. Yena likhanyelwe amadama nje wasezulwini. Yena likhanyelwe le kwiitanki zamanzi wasezulwini. Amanzi esibe siphezu esibhakabhakeni, lazalisa ihlabathi ngamanzi ngamanzi kwimithombo enzonzobila. Yiyo loo nto ke andiyiboni amanzi namhlanje ngaphezu esibhakabhakeni.
IBhayibhile usoloko impendulo ukunika. IBhayibhile ukunika ukholo usempilweni. Ngaba ulifunda ngoko ke akuyi kubakho engalunganga.
Vecka 19, söndag 16 maj 2021 kl. 17:39